"Sulfasalazine EN": Ngokungafani "Sulfasalazine", incazelo kanye nokubuyekeza
Izifo Crohn - zokugula emathunjini, ukuba nokuthambekela inchubekelembili. ukuvuvukala Transmural zibhebhetheka futhi esibonakala ngokuqina ezihlukahlukene yezinkinga wendawo kanye namafomu letindzala. Isifo sithinta wonke ukushuba odongeni wamathumbu futhi unciphise mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi yakha lingene, abscesses kanye nezilonda. Ukuze umise inqubo isifo isiguli linqume izidakamizwa eqeda ukuvuvukala.
Lezi imithi eminye esebenza ngempumelelo ukuqeda izimpawu ka Crohn futhi izilonda emathunjini (UC), zihlanganisa imithi "sulfasalazine-EN" futhi "sulfasalazine." Imithi nazo engabelwe -rheumatoid arthritis, i-ekwelapheni ubuhlungu nokuvuvukala. Njenganoma izidakamizwa eziningi, banayo Izimo zabo futhi side effects. Kuyini izidakamizwa "sulfasalazine-EN", ngokungafani "Sulfasalazine" kuye yini? Lonke ulwazi uzokwazi ukufunda kulesi sihloko.
Khipha ifomu bese iqembu leli khono 'sulfasalazine-EN "kusho
Umuthi anezakhi eqeda ukuvuvukala futhi lusetshenziselwa ukwelapha Crohn isifo futhi izilonda emathunjini. Enziwa ifomu ithebhulethi, brown ukukhanya. Ngokungafani izidakamizwa "Sulfasalazine" amaphilisi "Sulfasalazine-EH" camera nge enamathela okuyisipesheli ancibilikisa kuphela emathunjini. Ingqikithi eziyisisekelo lokulungiselela sulfasalazine at mg 500. Kusho phama amabhamuza amaphilisi 10.
It wasebenzisa izidakamizwa ukuqeda ngezimpawu zesifo Crohn futhi izilonda emathunjini. Sulfasalazine ikhishwe ngaphambi aminosalicylic acid, okuyinto kunemiphumela eqeda ukuvuvukala endaweni ukuguguleka kumiswa. Sulfapyridine nayo kwakhiwa, okuyinto has umsebenzi elwa namagciwane futhi kuvimbela umsebenzi gonococci, streptococci futhi Escherichia coli.
Uma amaphilisi udle neze ugxile esiswini. Lapha basuke wajinge wanamatsela ngaphansi isenzo microflora emathunjini bese ifomu sulfapyridine 75% aminosalicylic acid futhi 25%. Kwaphela izinsuku ezintathu kungavumi, ketshezi ikakhulukazi excreted ngu nezinso kuphela amancane ngamaphesenti isilinganiso - indle. Lezo emzimbeni wesiguli ihlinzeka esebenzisa "Sulfasalazine-EH." Ngokungafani "Sulfasalazine", ukubuyekezwa imikhiqizo - konke lokhu kwaziswa kuwufanele ukuhlola ngaphambi kokuba uqale ukwelashwa.
Uma usebenzisa umuthi?
Umuthi kuboniswa ngenxa pathologies ezilandelayo:
Kwenqatshelwe ngokuthatha izidakamizwa ezimweni ezinjalo:
izinso kanye isifo sesibindi;
Hypersensitivity kuya izinto kufakwe nokulungiselela.
Ngaphambi ekuqaleni inqubo yokwelapha kudingeka sitadishe ngokucophelela zonke contraindications lesi sidakamizwa "sulfasalazine-EN." Ngokungafani "sulfasalazine, imiyalelo ezikhethekile - lonke ulwazi kubalulekile. Umuthi lingasetshenziswa ngemuva kokuxoxisana uchwepheshe.
Ngayiphi umthamo ukwelashwa ezinqunyiwe?
Ngemva ukuhlolwa, ucwaningo futhi acacise sitholakele udokotela ekunika umuthi yawo ekwelapheni isifo Crohn futhi izilonda emathunjini (izilonda emathunjini). Umuthi esithathwayo isikimu ekhethekile:
Ngosuku lokuqala - 500 mg kathathu noma kane;
Ngosuku lwesibili - 1 igremu njalo emahoreni ayisithupha;
zonke ezinye izinsuku imithi ezithathwe 2 noma 1.5 g
Ngemva ekuthuthukiseni nesineke kokushiya umthamo ukulondoloza izinyanga ezimbalwa kakhudlwana. imithi eyanele kuyinto mg 500 kanye ngosuku. Ukulungisa ekwelashweni kungaba kwenziwe kuphela onguchwepheshe.
Izingane ngemuva kweminyaka engu-5 kuya ku-7 izidakamizwa aqokwe 250-500 mg kanye ngelanga. Ngemva kweminyaka engu-7 ubudala umthamo kuyinto 500 mg izikhathi 6 ngosuku.
Ngo-rheumatoid arthritis, i-izidakamizwa dosed njengomuntu omdala ngumuntu algorithm ethile:
ngesonto lokuqala - 1 ithebhulethi umthamo mg 500 kanye ngosuku;
Ngesonto lesibili - 500 mg kabili ngelanga;
ngesonto lesithathu - 500 mg kathathu.
Inkambo yokwelashwa isesikhathini izinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu, kuye ngokuthi kobukhulu sifo kanye izici ngamunye umzimba.
umthamo wansuku zonke akufanele bube ngaphezu kuka-3 g we nomuthi "Sulfasalazine-EH." Ngokungafani "Sulfasalazine" manual likuchaza ngokuningiliziwe. Lokhu kusebenza ukwamukelwa kusho busebenze.
Izingane rheumatoid arthritis izidakamizwa inikezwa izinga 50 mg ngayinye 1 kg esisindo ngosuku, ihlukaniswe ezimbili noma ezintathu reception iyunifomu. Ezigulini emva kweminyaka 16, umthamo eliphelele elivumelekile kuyinto 2, umuthi iqondiswa ngomlomo ngemva kokudla. isidingo sakhe ukuze siphuza neziphuzo kakhudlwana futhi musa ukuhlafuna.
Ukungasinaki izincomo mayelana umthamo kungaholela ukuthuthukiswa zalezi zimpawu ezingemnandi:
Ubuhlungu obukhulu besisu,
Isiguli saphathwa ukwelashwa lingaze, lavage esiswini. Kubalulekile ukulawula ukuchama.
Kufanele kube ngokuvumelana ukulungiselela imfundo 'sulfasalazine-EN. " Ngokungafani "Sulfasalazine" (izakhiwo, ifomu ukukhululwa) abangelutho. Nokho, kufanele ucele udokotela wakho ukuthi fomu engcono ukuthatha imithi.
I-ejenti yezokwelapha kungokwalabo iqembu izidakamizwa eqeda ukuvuvukala, wabonisa for ekwelapheni isifo Crohn futhi izilonda emathunjini. It ikhiqizwa ngefomu ithebhulethi umbala ophuzi onsundu. Ukwakheka izidakamizwa kuhlanganisa sulfasalazine (500 mg).
Umuthi kunemiphumela eqeda ukuvuvukala futhi imithi elwa nawo. Futhi possesses immunosepressivnym futhi enqanda ukuhlasela kwesifo samalunga senzo. Isakhi esiyinhloko amaphilisi, sulfasalazine, kuba nomphumela omuhle phezu sibonga amathumbu ukuba izingxenye ezimbili ezisebenzayo. Lokhu sulfapiridinon futhi aminosalicylic acid. umthelela Bacteriostatic ngokumelene diplococci, Staphylococcus no E. coli izidakamizwa "Sulfasalazine-EH." Ngokungafani "Sulfasalazine" incazelo deystvueschego ingxenye - yonke imininingwane enikeziwe in the imiyalelo.
Izinkomba kanye contraindications
I imithi lezi pathologies:
nezinhlobo ezahlukene zokuphikiswa-rheumatoid arthritis.
isibindi ezinzima futhi ukwehluleka kwezinso;
ngaphansi kweminyaka engu-5;
anda hypersensitivity kuya izingxenye.
It has abangelutho izidakamizwa "sulfasalazine - EN" ngokungafani "sulfasalazine." Yokusetshenziswa uchaza izinkomba ezifanayo kanye contraindications. Yikuphi imithi ukusebenzisa uma, tshela onguchwepheshe.
Ngosuku lokuqala ukwelashwa abadala imithi iphathwe umthamo mg 500 4 izikhathi, khona-ke ngosuku lwesibili - 1 g izikhathi 4, eminye indlela ezivela 1.5 2 g ngosuku. Inkambo yokwelashwa incike kobukhulu inqubo kanye izici ngamunye umzimba.
Overdose kungaholela zimpawu ezilandelayo:
Ayikho abalulekile side effects izidakamizwa ezifana has "Sulfasalazine-EH." Ngokungafani "Sulfasalazine" liqukethe yokuthi imithi imbozwe igobolondo.
Uma kunoma yimiphi imikhiqizo echazwe ekuthengeni ayikwazanga ibe ekhemisi, onguchwepheshe ayoyikhetha esikhundleni izinga.
Umuthi anezakhi eqeda ukuvuvukala futhi zinikwa isifo Crohn futhi izilonda emathunjini. Iyatholakala ngesimo iphilisi ophuzi. Ukulungiswa kuhlanganisa mesalazine at 250 kanye 500, futhi ejenti 1 g eqeda ukuvuvukala, anti-oxidant nomthelela odongeni emathunjini
hypersensitivity kuya izingxenye.
Ekuqaleni le nqubo zokuphulukisa, kufanele bahlolisise zonke izici "salofalk" nokulungiselela "sulfasalazine-EN." kusukela "Sulfasalazine" Umehluko uwukuthi izinto ezidingekayo ukuze isicelo. Izidakamizwa bathathwa amacebo afanayo.
Iziguli wabele izidakamizwa ngesikhathi 500 mg kathathu ngosuku. Ezimweni ezimbi kakhulu, umthamo kungenziwa lenyuke ukuze 3 amagremu ngosuku. Izindlela yokutholwa izinyanga ezintathu.
"Sulfasalazine-EN" imithi. Ngokungafani "Sulfasalazine": Izibuyekezo nesineke
Ezimbili ezifanayo ukubunjwa zomuthi. Umehluko kuphela - ukuthi "sulfasalazine-EN" embozwe igobolondo okuyinto encibilikayo kuphela emathunjini, ngokungafani kuya "Sulfasalazine" amaphilisi, okuyinto camera nge ifilimu. Libuye umuthi wokuqala ngokuya komzimba ukuthi azibonakali ngesimo ukuqubuka futhi ukulunywa esikhumbeni. Uma ukholelwa ukuthi Izibuyekezo iziguli, imithi "Sulfasalazine" ungaphakathi sisikhulu.
Ochwepheshe ngikuveze ukuthi kokubili izidakamizwa kungaholela side effects. Ngezinye izikhathi isicanucanu, ukuhlanza nezinhlungu esiswini. Uma lokhu has ejenti azinakwa "EH-Sulfasalazine" ngokungafani "Sulfasalazine". Izithombe imithi futhi efanayo.
Ochwepheshe uqaphele ukuthi leli qembu izidakamizwa e ngezinga elifanayo kungasizi wonke umuntu. La mathuluzi ayithembeki okwanele izilonda amalunga neuropathy. Ukuvimbela ukuthuthukiswa ezinso, kuyatuseka ukugeza phansi amaphilisi lamanzi esiphethu in inqwaba ngosuku ukuze siphuza neziphuzo kakhudlwana kulo. Yini enye kuyindlela yokuthola "sulfasalazine-EN" ngokungafani "Sulfasalazine"? Analogue (izidakamizwa "salofalk"), noma zinikwa pathologies efanayo, kodwa likwazi mismatches okuningi. Lokhu kungenxa umehluko kwengoma.
Uma isiguli izinkinga esiswini, khona-ke kungcono ukuthatha "sulfasalazine-EN", engeke chaza esiswini, kodwa emathunjini. Inani elincane lama-iziguli kusaqalwa ekutholeni izimali kuleli qembu bangase babe imfiva, ukuqubuka kwesikhumba, okuyinto kudlule bebodwa emva kwezinsuku ezimbalwa yokwelapha.
Ukweqiwa izidakamizwa akhethiwe kumuntu ngamunye, kuya izilonda emathunjini bese nesigaba lesi sifo. Phakathi acute nokushintsha kokudla nokufakwa umuthi ifinyelela ukusebenza walo omkhulu, bese, ukuthuthukisa isimo, kancane encishisiwe. Uma isiguli lapho uphuza imithi ikakhulukazi manifest side effects, ke lokhu kufanele kubikwe kudokotela wakho. Impendulo ezigulini, omkhulu ezibalweni phakathi izidakamizwa. Ngokungafani "Sulfasalazine" "sulfasalazine-EN" izidakamizwa - kuphela iqiniso lokuthi izidakamizwa ancibilikisa esiswini kungabangela ubuhlungu esifundeni epigastric.
Uma njalo amaphilisi ngokuvumelana isikimu ngenhla, kungenzeka ukumisa inqubo ithambo ekubhujisweni rheumatoid arthritis. Umuthi kungenzeka zaphathwa abadala nezingane emva kweminyaka 5. Musa idlule umthamo ukuze abangele side effects, okuyinto zigcwele eziyingozi ezinye kwezitho izinhlelo. Futhi, i-tablet kungcono ukuphuza ngemva kokudla futhi baphuze ane-alikhali yabo izixazululo, ezifana lamanzi esiphethu. Kakade emva kwenyanga eyodwa ukwelashwa, ngcono kuzokwenzeka. Imithi iqondiswa isikhathi eside, kodwa akakubangeli yokulutheka kanye nokuqaleka izimpawu. Kusho "sulfasalazine-EN" futhi "Sulfasalazine" akhishwa ekhemisi nge kadokotela.
Retabolil kanjani yingozi? Iziyalezo ukubuyekeza
Medicine 'fluconazole'. Ukubuyekeza, izincazelo
"U-Ivy Pektolvan": isicelo, imiyalelo, Izimo
Umuthi 'tirozol ": yokusetshenziswa, intengo, analogs nempendulo imithi. Ngingaba uhlanganise "tirozol" kanye notshwala?
I-hysteria ezinganeni. Indlela yokusinda kule nkathi enzima?
Embasi German e Moscow, Minsk nase-Ukraine
Igama elithi "lekushuca" yini ukuthi kusho ukuthini?
"Mezoskulpt C 71": libuyekeza cosmetologists, izici isicelo kanye nempumelelo
Meg Griffin - edumile cartoon uhlamvu
Umculi waseMelika nomdlali we-actress uNicky Minaj: ngaphambi kokuhlinzwa kokuhlinzwa kweplastiki
Kuthiwani uma kubuhlungu enhlokweni yemphambili?
Ubani owabulala Achilles? zamaGreki Lasendulo
Indlela ukukhetha yekhasino kanye izinkokhelo osheshayo?
Isethi umzimba ngenduku Gymnastic. Ukuzivocavoca ngenduku izingane